Howlgalkii Naf hurnimo ee soo celiyay rajadii Shacabka Awdheegle(Warbixin+Sawirro) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Abdihakim Sharif Ali / August 18, 2019 August 27, 2019
Awdheegle(SONNA) Isbedelada iyo ififaalooyin jawi farxadeed ku dheehan ayaa u soo bidhaamaya bulshada ku dhaqan Deegaannada Al-shabaab laga qabsaday dhowaantaan,waxaana muuqa in haatan ay ka soo kabanayaan dhibaatooyinkii bulshada deegandaasi ay ku hayeen maleeshiyada Alshabaab,kadib markii ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ay awoodooda ku muquuniyeen kooxda Shabaab oo jab xoogan uu soo gaaray todobaadyadii ugu dambeyeey.
Xaaladda degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelada Hoose oo kamid ah goobihii ugu dambeyeey oo laga saaray maleeshiyada Shabaab ayaa deggan, waxaa ku sugan ciidammada Xoogga dalka, Al-shabaab howlgalladii looga saaray ayaa lagu gaarsiiyey jab xooggan oo maleeshiyo badan ayaa looga dilay, kuwa kalena gacanta ayeey ku dhigeen ciidammada Xoogga dalka.
Saraakiisha ciidanka ayaa warbaahinta dowladda u xaqiijiyey in ay dib u bilowdeen dhaq-dhaqaaqyadii kala duwanaa, sida Ganacsiga iyo Gaadiidka.
“Waxaa mahad u sugnaatay Alle SWT,marka labaada waxaan u mahadcelinaynaa intii nagala shaqeysay in aan nimankaan Jid iyo jahadiidka ah,oo bulshada nabadda u diiday aan ka saarno deeganaadaan,waxaan rabaa in aan idin sheego reer Awdheegle in aad tihiin dad wanaagsan oo qalbi furan,sida aad ula shaqeysaan ciidanka xooga dalka,100% halala shaqeeyo ciidanka xooga dalka si kooxahan umadda Soomaaliyeed dhiigoodi,hantidooda baneystay wax looga qabto”. Ayuu yiri Janaral Odawaa Yuusuf Raage taliyaah ciidanka dhulka ee Xooga Dalka Soomaaliyeed.
Waxgaradka iyo Shacabka deegaanada la xoreeyay oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa si weyn u soo dhaweyeey howlgalada ciidanka xoogga dalka ay ku bad baadinayaan nolosha shacabka oo ay dhibaateeyeen maleeshiyada Alshabaab.
Saameyntii ka dhalatay cadaadiskii guracanaa ee argagixisadu ku hayeen shacabka Degmada Awdheegle iyo deegaannadii u dambeeyey ee Al-shabaab laga saaray ayaa waxaa kamid ah in dadku ay waayeen adeegyadii muhiimka u ahaa noloshooda, sida, waxbarasho iyo caafimaad iyo kuwo kale,bacdamaa goobahaas ay burburiyeen argagixisada Al-shabaab intii ay joogeen halkaasi,balse haatan waxaa jirta rajo ku aadan in noloshii iyo adeegyadii bulshada ay dib u soo laabanayaan.
Xagjiriinta Shabaab ayaa lagu yaqaanaa in ay burburiyaan goobaha muhiimka u ah bulshada oo ay ka helaan adeegyada aas aasiga u ah noloshooda,ha noqoto waxbarasho,caafimaad,amni,ganacsi,si ay ugu sahlanaato in ay shacabku afduub ugu jiraan,balse waxaa taasi ka dhiidhiyay ciidanka Xoogga Dalka oo naftoodi u huray difaaca dadka iyo dalka.
Wixii ka dambeeyey markii argagixisada Alshabaab laga saaray deegaanadaasi bulshada ku dhaqan Awdheegle ee gobolka Shabeelada Hosoe ayaa dareemaya yiddidiilo ku aaddan in ay soo gaaraan hey’adaha kala duwan ee dowladda oo soo celiya dhammaan kaabayaasha aas-aasiga u ahaa nolosha bulshada.
Naftood hurayaasha ciidanka Xooga Dalka oo ka damqanaya dhibaatooyinka in muddo ah bulshadu ay ku hayaan Shabaab ayaa u muuqda kuwo aan meel ku hakan balse baacsanayaa meelkasta oo argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayaan.
Seddexdii bilood ee la soo dhaafay ayaa muuqaneysa in Argagixisada gacantooda laga saaray goobo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose,waana bilowga qorshaha ciidamada Qalabka sida ay isugu diyaarinayaan in guud ahaan ammaanka dalka si buuxda ay ugala wareegayaan Ciidanka AMISOM.